Amavidiyo wolwazi we-COVID-19 wezilimi eziningi - i-AfricArXiv
Kunemininingwane eminingi esakazwa nge-COVID-19 - eminye ithembekile kunabanye. Kubantu abaningi, kuyacindezela ukuhlela ngemiyalezo ehlukile - imvamisa ngezilimi ezingezona izilimi zabo.
Siphakamisa ukubhekana nalokhu ngemiyalezo emifushane, engaguquki enikezwe ngezilimi eziningi zesifunda / zasendaweni ngangokunokwenzeka. Kulokho, sidinga usizo lwabacwaningi kanye nabanye abaxhumana naye.
Sihlose ukudala amavidiyo wemizuzu emi-2 ngezilimi eziningi ngangokunokwenzeka ezethula umlayezo ongaguquki mayelana ne-COVID-19, amasu wokuqukatha nolwazi olusebenzayo lwempilo.
IsiSepedi [Iningizimu Afrika]
Ngifuna ukukhuthaza zonke izishoshovu zomdabu ukuba zenze imininingwane enjalo ye-COVID 19 namavidiyo wokuqwashisa noma ukuqoshwa kwamazwi ukuthola abantu babo ngalesi sifo. Sihalalisela uJonathan Sena nabangane ngaleli thuba lokwazisa abantu abangamaMaasai.
Posted by IPACC - Ikomidi Lokuqondisa Labantu Bomdabu Base-Afrika ngoLwesihlanu, Ephreli 24, 2020
Uhlu lwadlalwayo feat. Gbagyi, Yoruba, Igbo, I-Efik, Urhobo, Hausa & Ulimi Lwezandla [ENigeria]
Bheka amaphuzu okuxoxa ngezansi
Abahumushele olimini lwakho lwasekhaya
Faka ukubingelela, isitatimende esakhayo, isiqinisekiso sokuthi isenzo ngasinye singenza umehluko
Zithwebule ngokwakho wethula lo mlayezo. Hlela imizuzu engafika kwemithathu (usayizi wefayela> 3MB)
Faka ilebula ividiyo ngale ndlela elandelayo: I-COVID_Introduction_LANGUAGE_COUNTRY_dd-mm-2020
Faka ividiyo yakho ku-YouTube bese ugcwalisa leli fomu le-Google: https://tinyurl.com/COVID19-video-submission.
Sisebenzisa imininingwane evela kwifomu le-Google sizothola uhlu lwamavidiyo phakathi kwe-Access 2 Perspectives iwebhusayithi https://access2perspectives.com/covid-19.
Sizophinda futhi sikhiphe ama-video amasha, senze i-YouTube i-Access2Persepectives YouTube isiteshi futhi wabelane ku-Facebook. Sizofaka imininingwane yokusabalalisa kuwebhusayithi ye-Access2Perspecadors.
Twitter: Thumela ividiyo yakho kubangani nomndeni wakho, uthinte ngayo, uyihlanganyele nabahleli bomphakathi (amasonto, izikole, izinkundla zokuxhumana). Sicela usimake ku @NomzamoMbatha futhi usebenzise i-hashtag # COVID19video
Noma yiziphi izinkinga, imibuzo noma ukukhathazeka, i-imeyili: info@access2perspecadors.com
Sifuna ukuqinisekisa ukuthi amavidiyo abiwa kabanzi ngangokunokwenzeka. Asibeki imingcele ekusakazweni kwamavidiyo. Ukuqinisekisa ukuthi siziphathe kahle siphakamisa ukuthi konke ukwabiwa kulawulwe yilayisense le-Creative Commons cc-by licence (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
Zazise - uvelaphi, wenzani?
Sawubona, igama lami livela ku (idolobha, izwe)
Ama-Coronaviruses yiqembu lamagciwane ahlobene adala izifo zokuphefumula kubantu.
Iningi lezifo ezidalwa ama-coronavirus alithambile kepha lingaba likhulu kakhulu.
Muva nje kugula okusha okubangelwe yi-coronavirus, i-COVID-19, kukhonjwe futhi kusabalale ngokushesha emhlabeni jikelele.
I-COVID-19 yisifo esisanda kutholakala esibangelwe yi-SARS-CoV-2 coronavirus.
Yaqala ukubonwa ezigulini ngasekupheleni kuka-2019 eWuhan, esifundazweni saseHubei maphakathi neChina.
Lolu hlobo lwe-coronavirus luhamba kalula phakathi kwabantu futhi luye lwasakazeka ngokushesha kusukela lapho.
I-COVID-19 manje sekubikwe emazweni angaphezu kwe-150 emhlabeni jikelele neChina, i-Italiya, i-US, iSpain kanye neJalimane njengamanje.
I-World Health Organisation (WHO) imemezele ukubhebhetheka kwesifo esiwumshayabhuqe ngo-2019 kuya ku-20 maphakathi no-Mashi 2020.
Izimpawu ezivame kakhulu ze-COVID-19 umkhuhlane, ukukhathala, nokukhwehlela owomile.
Izimpawu zivame ukuba mnene futhi ziqale kancane, zihlala kuze kuphele amasonto amabili.
Abantu abaningi bayalulama kulesi sifo ngaphandle kokudinga ukwelashwa okukhethekile.
Izimpawu ezinkulu zalesi sifo zifaka phakathi ukuphefumula okuyinkinga, isifuba esiqinile, ukudideka nezindebe noma ubuso obukhulu.
Amaqembu athile abantu asengozini enkulu yezifo ezinzima, kufaka phakathi, abantu asebekhulile, kanye nalabo abanezimo zezokwelapha ezandulelayo kubandakanya umfutho wegazi ophakeme, izinkinga zenhliziyo noma isifo sikashukela.
Ungakwazi yini ukuthelela abanye abantu uma ukhombisa izimpawu ze-coronavirus?
Abanye abantu bathola kuphela izimpawu ezinzima kakhulu futhi bangase bangazithathi njengokugula.
Kodwa-ke, abantu kusenesikhathi ekuthelelekeni yilezi zimpawu ezithambile kakhulu kutholakale ukuthi banamazinga aphezulu egciwane futhi bangatheleleka abanye abantu.
Ngokushesha lapho kuvela izimpawu, kubalulekile ukuqala ngokunciphisa ukuxhumana nabantu nokuzihlukanisa 'ukuze unciphise ingozi yokusabalalisa igciwane phambili.
Ubufakazi buveza ukuthi isifo esithambile, esinezimpawu ezimbalwa, sivamile ezinganeni. Amacala abantu abadala adlulisa i-COVID-19 ngaphandle kokukhombisa izimpawu zesifo nawo abikwe, yize kungacaci ukuthi lokhu kuvame kangakanani.
Yini okufanele uyenze ukuze uphephe?
Ukuze uzivikele, kubalulekile ukugeza izandla zakho ngensipho nangamanzi kahle nangokujwayelekile, ikakhulukazi ngemuva kokuthi uphumele obala.
Ama-gels otshwala nawo angasetshenziswa njengenye indlela.
Kubalulekile nokugwema ukuthinta amehlo akho, ikhala nomlomo ngezandla ezingagezwanga.
Uma i-COVID-19 isakazeka emphakathini wakho, kubalulekile futhi ukubeka ibanga elithile phakathi kwakho namanye amalungu omphakathi.
Gcina abanye baphephile uma unezimpawu
Ngemuva kokuthintana naleli gciwane, izimpawu zingavela ezinsukwini eziyi-14 kamuva.
Uma ucabanga ukuthi uvezwe kothile okungenzeka ukuthi unegciwane noma uqala ukuveza izimpawu, kubalulekile 'ukuzihlukanisa' izinsuku eziyi-14 ukugwema ukudlulisela leli gciwane.
Hlala ekhaya uma ugula noma amanye amalungu omndeni wakho egula.
Buza umndeni, abangane noma omakhelwane uma bekwazi ukukuphakela ukudla nokugwema ukuthutha komphakathi.
Uma kufanele uphume endlini, kufanele ugqoke isikhumba sobuso, futhi uqiniseke ukumboza umlomo nekhala ngethiphu lapho ukhwehlela noma uthubelezela.
Ezifundeni eziningi ezithintwe yileli gciwane, kudingeka 'ukusabalalisa umphakathi' ukuvimba ukuqhubeka kwaleli gciwane.
Kuyini ukunqamula emphakathini?
Ezifundeni ezithinteke kabi, abantu bacelwa ukuthi basebenzise izindlela zokusabalalisa umphakathi.
Lokhu kufaka ukunciphisa inani labantu oxhumana nabo abantu usuku lonke ukuze banciphise inani lokuhanjiswa.
Abantu abaningi bayakhuthazeka ukuthi basebenze besuka ekhaya futhi bagweme ukuthutha komphakathi uma kungenzeka.
Ukuhlangana nabangane nomndeni (kufaka phakathi imishado nama christenings) kuyaphoxeka.
Abantu abathathwa njengabasengozini yokutheleleka kanzima bacelwa ukuba balandele imithetho ebukhali kunamanye amalungu omphakathi.
Kubalulekile ngalesi sikhathi ukucabanga ngabantu abasengozini emphakathini futhi unakekele wonke umuntu impilo yengqondo.
Imiphakathi ibisakha amaqembu axhumana nabantu, okusho ukuthi abantu bangacela usizo komakhelwane babo uma kudingeka.
Uma kudingeka ukuthi uhlale ekhaya, kubalulekile ukuqhubeka nokuzivocavoca, udle ngokunempilo futhi uhlale ukhuthele.
Imindeni eminingi nabangane abaningi bayaxhumana besebenzisa ubuchwepheshe obude njengamafoni, i-intanethi nemidiya yezokuxhumana.
Kungani ukuhlukaniswa kwezenhlalo nokulawulwa kokuhamba kusenziwa ngohulumeni?
Lezi zinqubomgomo zenzelwe ukunciphisa isibalo sokusebenzisana kwabantu, okwenza kube nzima ngegciwane ukusakazeka emiphakathini.
Ngokwenza lokhu, sinethemba lokuthi izibhedlela nezindawo zokwelapha ezifundeni ezithintekile ngeke zikhungatheke ngokweqile, futhi zinganikeza ukwelashwa kwamacala amaningi ngangokunokwenzeka.
Ngakho-ke ohulumeni abaningi bavimba imibuthano emikhulu, njengamakhonsathi nemicimbi yezemidlalo.
Ezinye izindawo eziheha izixuku, njengezitolo ezingabalulekile, indawo yokuzivocavoca kanye nezindawo zokudlela nazo zingacelwa ukuba zivale.
Izikole namaNyuvesi kungenzeka ukuthi nawo avaliwe nawo.
Amazwe amaningi futhi abeka imikhawulo yokuhamba, anciphisa ukuthi ngubani ongangena futhi ashiye amazwe.
Indawo eyisethenjwa yokuthola imihlahlandlela eqondene nezwe
Yini esingayilindela ezinyangeni ezizayo?
Lokhu ukugula okusha, esisenokuningi okufanele sikufunde ngakho.
Ngenkathi kwamanye amazwe ukusakazeka kwalesi sifo kubonakala kuhamba kancane, kwamanye amazwe amaningi sibona okuphambene.
Kuyisimo esishintsha ngokushesha, futhi kubalulekile ukuthi abantu bagcine ulwazi olusha kanye nesiqondisi sohulumeni babo.
Izinsizakusebenza ze-WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Izikhungo Zokulawulwa Kwezifo Nezifo. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
I-Q & A ye-AfricArXiv COVID-19 ngezilimi zesifunda zase-Afrika: https://info.africarxiv.org/qa-around-covid-19-in-regional-african-languages/
Umbhalo unikelwe ngu
U-Anna McNaughton, IYunivesithi yase-Oxford, i-ORCID iD: 0000-0002-7436-8727, I-Twitter: @AnnaLMcNaughton
ULouise Bezuidenhout, IYunivesithi yase-Oxford, i-ORCID iD: 0000-0003-4328-3963, I-Twitter: @loubezuidenhout
UJohanna Hasmann, I-Access2Perspecadors, i-ORCID iD: 0000-0002-6157-1494, Twitter: @johave
Lo mbhalo nawo wonke amavidiyo angaphansi CC-BY-SA 4.0 ilayisense
Yisho njengo: UBezuidenhout, uLouise, uMcNaughton, u-Anna, no-Havemann, uJohanna. (2020, Mashi 26). Amavidiyo wolwazi amaningi we-COVID-19. UZenodo. doi.org/10.5281 /